Nezvedu - NINGBO ACE MACHINERY Co., Ltd.
ACE Mashini inonyatsobatanidza simba uye finesse kukuunzira yakanakisa mukongiri uye compaction michina. Seye anotungamira weChina anogadzira inorema-basa ekuvaka maturusi, isu tinokwanisa kupa vatengi akasiyana siyana akazvipira zvishandiso zvinosanganisira pombi yemvura, rebar cutter, rebar bender, kongiri saha, uye kongiri musanganisi. Zvakare inowanikwa isarudzo yakakwana yekongiri michina zvishandiso. Yakanaka kwazvo pakuvaka kwekutanga uye kugadzirisa, zvigadzirwa zvedu zvinowanzo shandiswa munzvimbo dzekushandira dzakadai semigwagwa, dzimba, mapaza, njanji, uye nhandare.
Zvishandiso zveACE zvinotenderwa nemaindasitiri zviyero senge CE uye CCC. Kutanga muna 2009, zvivakwa zvedu zvekugadzira zvakaongororwa gore rega rega nehunyanzvi kubva kuTÜV SÜD Boka. Sezvo yedu yekune dzimwe nyika yekuparadzira network yakavambwa muna 2005, isu takachengetedza nzvimbo dzekunze mumatunhu anosanganisira America, Africa, Eastern Europe, Southeast Asia, Middle-East, nezvimwe.
Yedu Yepamberi Chitupa
Kambani yedu yakaverengerwa muna 1995 seZhenxing Kuvaka Machina Fekitori. Isu tine dzimbahwe mukati meYinzhou Dunhu reNingbo Guta, chinzvimbo cheChinese chemasipiriti-mashandiro edu akatanga nehunyanzvi muchinhu ichi. Anoda kusvika makumi maviri emakore ruzivo rwekutengeserana rwekunze rwakatibvumidza kuti tibude semugadziri ane mukurumbira muindasitiri yekumba. Imba yekambani yedu inosvika 8,000m2 apo nzvimbo yepasi yakasanganiswa yezvivakwa zvedu inosvika kusvika ku23,000m2. Pedyo padyo nevese Ningbo Port uye iyo Lishe International Airport inotipa zvinhu zviri nyore.
Zvikonzero zvekusarudza Ningbo Ace Machinery Co, Ltd.
Tine mari yakanyoreswa ye1.3 mamirioni RMB uye vanopfuura vashandi ve120 vanosanganisira mainjiniya emagetsi matatu, vatariri vatatu vezvigadzirwa, maneja ekuchengetera zvinhu, vashanu QA vanachipangamazano, vashandi vanoshanda vanomwe, nevashandi vane hunyanzvi 95. Muna 2012, takanyora mari yemamiriyoni makumi matatu nemasere eRMB. Yedu kambani yezvivakwa yakakamurwa kuita kune-yega-ane madhipatimendi ehunyanzvi hwakadai sekuvandudza, kugadzira, gungano, sampling, utsanana, kuvimbiswa kwemhando yepamusoro, uye zviwanikwa zvevanhu. Yakasarudzika manejimendi inotibvumidza isu kukoshesa iyo inoshanda nharaunda uye nekuvandudza kuyerera maitiro nepo muchinyatso kudzora mhando yekudzora sisitimu.